Fy Rasolofoniaina : “Mianatra mamela ny foko hiaina 100% aho” – Blaogin'i Voniary
Ny kolontsaina Malagasy, ny fivavahana isan-karazany na tandrefana na tantsinanana dia samy manaiky fa vatana, fo sy saina ary fanahy no maha olona ny olona iray. Saingy iza amin’izy ireo no omen-danja amin’ny fiainana andavanandro mba hananana fiadanana anaty ka afahana mizara fiadanana amin’ny manodidina? Efa hitantsika ny fikolokoloana ny fanahy ary ny fikolokoloana ny vatana eo amin’ny lehilahy sy eo amin’ny vehivavy. Amin’ity fizarana fahatelo ity indray dia ny fikolokoloana ny fo no horesahina.
Ny fo dia taova manapariaka ny ra hikoriana eraky ny vatana, raha amin’ny lafiny azo tsapain-tanana no resahina. Fa ny fo ihany koa dia loharanon’ny aina sy ny fihetsem-po raha amin’ny lafiny tsy hita maso. Ny fo no entina mitia, mankahala, ahatsapana fahatezerana, alahelo sy fifaliana.
Antsafa niarahana tamin’i Fy Rasolofoniaina no entiko eto anio. Mpanakanto fanta-daza sy misandratra tokoa raha i Fy Rasolofoniaina satria raha ny horonankirany mitondra ny lohateny hoe “Mitonia”, izay nivoaka ny 16 Mey 2019, dia efa mahazo fijerena 900.000 isa ao amin’ny tranonkala YouTube. Ny hirany vaovao izay mitondra ny lohateny hoe “Misy Anao” dia nivoaka ny 11 septambra lasa teo ary vao ny alahady 13 oktobra lasa teo ry zareo no niaka-tsehatra tao amin’ny CCESCA. Isaorako manokana i Reko – Fy & His Band nanaiky namaly ny fanontaniana napetraka taminy.
Ny tarika REKO tarihin’i Fy Rasolofoniaina
Sary : Facebook Reko – Fy & His Band
Miray Lalaina: Inona avy no zavatra tena manome aingam-panahy an’I Fy ka mahatonga anao hamorona tononkira sy feo tsara be tahaka ireny?
Fy Rasolofoniaina: Ny FIAINANA no tena manome tononkira ahy, amin’ny alalan’ireo fitaizana sy anatra entiny, na mipaka amiko mivantana izany na amin’ny manodidina.
ML: Mazana isika gasy tenenina ho toy ny olon’ny fo. Amin’ny hevitrao lafiny tsara ve izany sa lafiny ratsy?
FR: Tsara raha toa ka tsara ny fo, fa ratsy raha toa ka ratsy ny fo.
ML: Aminao manokana: ahoana ny fikolokoloana ny fo amin’ny maha loharanon’ny aina azy?
FR: Mianatra mamela ny foko hiaina 100% aho. Tena hiaina ny alahelo, mba hahasitrana azy ka hahatoky indray. Tena hiaina ny hatezerana mba hampianatra azy hamela. Tena hiaina hafaliana mba hahaizany hankamamy sy ho hafa-po. Tsy mody mahery, na mody mampalahelo, fa mamela ny FITIAVANA hanefy. Hanova ny vato ho nofo.
Fy Rasolofoniaina ao amin’ilay horonankirany “Misy Anao”
Azo fehezina tahaka izao izany ny fikolokoloana ny fo raha amin’ny lafiny fihetsehany: hiaino tsara ny fihetsem-po rehetra fa aza totofana na itsoahana. Aza amaivanina ny fihetseham-po fa mankarary na itarina fa manimba ny manodidina. Hiaino izay fihetseham-po ateraky ny zavatra andalovanao fa misy fampianarana ao ambadik’izy ireny. Fehin-kevitra mivoitra ihany koa ny hoe sady tsy fahalemena no tsy hery ny hoe “olon’ny fo”, fa ny hampiasana azy no zava-dehibe.
Amin’ny lahatsoratra manaraka dia tafatafa miaraka amin’ny olona eo amin’ny sehatry ny fahasalamana no ho taterina amintsika mikasika ny fikolokoloana ny fo amin’ny maha taova azy. Mamakia finaritra ary tompoko!
Fanairana hambom-po, Non classé, Resadresaka
fahaiza-miaina, fikolokoloana fo, fitiavana, fy rasolofoniaina, Mizara fitiavana, reko fy & his band
2 commentaires sur “Fy Rasolofoniaina : “Mianatra mamela ny foko hiaina 100% aho””
Sitraka Arivelo Ralimanana dit :
Misaotra mizara Fy sy Ando a